Xiddiga Reer Brazil Lucas Moura Oo Qirtay Inay U Badan Tahay Inuu Ku Biiro Paris Saint-Germain. - jornalizem
Xiddiga Reer Brazil Lucas Moura Oo Qirtay Inay U Badan Tahay Inuu Ku Biiro Paris Saint-Germain.
Lucas Moura ayaa xaqiijiyay inay u badan tahay inuu ku biiro Paris Saint-Germain taasoo burburineysa hamigii ay Manchester United ka qabtay inay la soo wareegto ciyaaryahanka reer Brazil. Sida ay qortay website-ka Sky Sports News.
Tababaraha kooxda United Sir Alex Ferguson ayaa xaqiijiyay bishii hore inuu xiiseynayo inuu ciyaaryahanka la soo wareego, waxaana uu u seegay kulankii axada ee saaxiibtinimo ee Valerenga si uu u riixo heshiislka.
Red Devils ayaa u muuqatay inay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto 19 jirka Sao Paulo, lakiin kooxda boorsada weyn ee PSG ayaa haatan u muuqata inay ciyaaryahanka ka dul qaadeyso kooxda Premier League ka dhisan.
Warar kale ayaa soo jeedinaya in United aysan dooneynin inay bixiso lacagta uu dalbanayo wakiilka Moura, taasoo keentay inay sii kala fogaadaan.
Moura ayaa haatan xaqiijiyay inuu wadahadal kula jiro PSG isagoo filanaya inuu Sao Paulo ka tago bisha Janaayo si uu u la midoobo raga ay isku wadanka yihiin Thiago Silva iyo Leonardo oo ah agaasimaha kooxda Faransiiska.
“Waa arin fiican arintaan, waxaan sii joogi doonaa Sao Paulo ilaa iyo dhamaadka sannadka. Si fiican ayayna haatan u socdaan wadahalada ” Moura ayaa saxaafa u sheegay ka dib markii xulkiisa ay u soo baxeen finalka ciyaaraha Olimbikada.
Waxa uu sidoo kale u sheegay Globo Esporte: “Muran kama taagna in arintaan ay ii fiican tahay sababtoo ah waxaan sii yara caawin doonaa Sao Paulo. Waxaan mar walba dhahayay inaan doonayo inaan koob la qaado ka hor inta aanan ka tagin kooxda oo aan u soo saaro koobka Libertadores Cup.
“Hadii uu heshiiska noqdo inaan baxo Janaayo, markaas waan awoodi doonaa inaan sidaas u sameeyo Sao Paulo”.
“Waxaan haatan diirada saarayaa xulka qaranka. Wax intaan ka badan waxaan sheegi doonaa ka dib ciyaaraha Olimbikada. Wadahadalada waa ay socdaan, lakiin lama soo gabagabeyn weli”.
“Waxaan la hadlay Thiago Silva iyo Leonardo, waxaana ay wax fiican iiga sheegeen kooxda, iyo qorshaha ay halkaas ka hirgelinayaan”.